စာရင်း ရှိ မယား ( ၃၃ )ယောက် ရှိတဲ့ မုံရွာ သာစည်နယ်က သူဌေးကြီး “ဦးဖိုးရှိ” အကြောင်း – Let Pan Daily
GYM အတူတူ ဆ�...
စာရင်း ရှိ မယား ( ၃၃ )ယောက် ရှိတဲ့ မုံရွာ သာစည်နယ်က သူဌေးကြီး “ဦးဖိုးရှိ” အကြောင်း
ဒြီ ပတင်း ပေါက်တွေ ကနေ နေ့တိုင်း ဦးဖိုး ရှိ ပစ်ချမဲ့ ခေါင်းအုံး ကို မယား အယောက် ၃၀ က စောင့်ဖမ်းကြ သတဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာ သာစည်နယ် မှာ ဦးဘိုးရှိဆို ခုထိ သိနေကြတုန်း နာမည်ကြီး နေတုန်း … စံပြ ပြောဆိုနေရတုန်း အဘယ် သို့ကြောင့်ဆိုတော် ဦးဘိုးရှိ တွင် စားရင်းရှိ မယား ၃၃ ယောက် ရှိသည် ဦးဘိုးရှိက လယ် ဧက သောင်းချီ ပိုင်တယ်ဆိုပဲ ..တနှစ် တနှစ် သီးစား ချ သည် ရော .. လယ်စာရင်း ငှါး များ ရာသီ သီနှံပေါ်ချိန် ဆို မိသားစု လိုက် လာကန်တော့ကြ ရသည် ..ထိုအချိန် တွင် သမီးပျို ချောချောမောမော ပါလာ ပါက.. ဦးဘိုးရှိ သဘောကျ လို့ ထားခဲ့ ဆိုလျင် ထားခဲ့ပေပဲ… မထားခဲ့လို့ကတော့ နောက်နှစ် သူ့လယ် မှာ အလုပ်မရဘူး သာမှတ် အဲ့လို
ဒီလို နဲ့ သူကြိုက်ရာ ယူထားတာ စာရင်းရှိကြီး ၃၃ေ ယာက် ကြုံဒိုး လေးတွေက ပါသေးဆို ဘဲ …ဦးဘိုးရှိ က ၃ ထပ်တိုက်နဲ့နေတာ .. တိုက်အောက်ဆုံးထပ်မှာ ဇာတ်စင် ကြီးဆောက်ထားသတဲ့ဇာတ်ခေါ် က ရင် ‘ သုရောနန္ဒီ ဇာတ် ‘ ဘဲ ကခိုင်း သတဲ့ . ဘာလို့တုန်း ဆိုတော့ အဲ့ဇာတ် က မင်းသမီး ကို ဂဠုန် ချီတဲ့ အခန်းပါ ဆိုဘဲ။အဲ့အခန်းရောက်ရင် ဦးဘိုးရှိက ဂဠုန် ခေါင်းဆောင်း ကြီး စွပ်ပီး သူကိုယ်တိုင် မင်းသမီး ကို ပွေ့ချီပီး သုတ်လေ့ရှိသတဲ့ …. ဦးဘိုးရှိက အဲ့ဂဠုန်ခေါင်းဆောင်း ကို အပိုင် ဝယ်ထားတာ… ဇာတ်ကြည့်ရင် ဘေးနားအဲ့ ခေါင်းဆောင်း ထားကြည့်ရော … မင်းသမီး ကို ဂဠုန် သုတ်ပြေးတဲ့ အခန်း ကလည်း … ဂဠုန်က အသုတ် ဇာတ်စင် မီးတွေကမှိတ် ပေး .. စင် ကိုအမှောင်ချ အဲ့လို ကွက်တိဖြစ်ရတာ…
ပီးရင် ဦးဘိုးရှိက မင်းသမီးကို အခန်းထဲ ခေါ်ပြေး ရော သူ နဲ့ အဆင်ပြေသွားရင် အဲ့ည ဇာတ် ဆက်ကစရာ မလို တော့ဘူး ပြီးဘီ …. အဲ့ မင်းသမီးက ငြင်းဆန်နေရင်တော့ ဇာတ်ဆက်ကရတယ် .. နောက်လဲမငှါးတော့ဘူး အဲ့လို ပြတ်သား တာ ဦးဘိုးရှိက တခါ က ညောင်ကန် မင်းသမီး ဇာတ်လာကတယ် မင်းသမီးက ငယ်လဲ ငယ် ချောကလဲချော ဆိုတော့ ဦးဘိုးရှိ မနေနိုင်ဘူး …. ဂဠုန်ခေါင်းဆောင်းဘေးချပီး သူ့ဇာတ်ဖြစ် တဲ့ သုရောနန္ဒီ ကခိုင်း… မင်းသမီး ဂဠုန်ချီတဲ့အခန်းလဲရောက်ကော .. ဘာပြောကောင်းမတုန်း မင်းသမီးချီပီး သူ့အခန်းထဲဝင်ပြေး ပါရော…
မင်းသမီး က လုံးဝ သဘော မတူဘဲ ပြဿနာ တက်ပီး မင်းသမီး ချက်ချင်း ပြန်ပါလေေ ရာလား … ဦးဘိုးရှိလဲ ဆန့်ငင် ဆန့်ငင်နဲ့ကျန်ခဲ့တာ…..တပတ်လောက် ဦးဘိုးရှိ အသဲကွဲနေတော့ တငူငူ တငိုင်ငိုင် …. ဒါနဲ့ ဦးဘိုးရှိမယားတွေလဲ မနေနိုင် အချင်းချင်းတိုင်ပင်ပီး မယားကြီး နဲ့ အခြားမယား၅ ယောက် တို့ ညောင်ကန်ရွာ လိုက် ပီး မင်းသမီးကိုဖျောင်းဖျကြတာ ၂ ရက်ကြာသတဲ့ … နောက်တော့ မင်းသမီးလဲ လိုက်လာပေးသတဲ့ ဗျာ…. ဦးဘိုးရှိက အဲ့လို ပိုင်တာ….ဒီတော့ ဒီနယ်တဝိုက် ဦးဘိုးရှိ ဆိုရင် ယောက်ကျား သားတွေရဲ့ အိုင်ဒေါ ဖြစ် ကရောပေါ့ …. ကိုယ် လည်း ကြားကြားချင်း ဦးဘိုးရှိ ကို ကြည်ညို လိုက် တာ ဆိုတာ .. သူ့အိမ်ကြီးသွားကြည့်ရတဲ့ အထိပါပဲ ကဲ မုံရွာသားတွေ သာစည် သားတွေ ဂုဏ်ယူရ တဲ့ ဦးဘိုးရှိ ဆိုတာ ဒါဘဲ ကလား…
မူရင်း Credit ပေး ပါ တယ်
ဆရာဇင်ယော်နီ ၏ (ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ မှ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ အထိ ) တစ်ပတ်စာ မနောမယ ဟောစာတမ်း
အိမျထဲမှာ ရှိနတေဲ့ ပိုးဟပျ၊ ပုရှတျဆိတျ၊ ခွငျ တို့ကို အလှယျ တကူ မောငျးထုတျနညျး (ရှယျထားပေးပါအုံး ..)
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ် ကူးစက် ခံရရင် – ရက်စွဲအလိုက် ဒီလိုတွေ ခံစားရလိမ့်မယ်
“ကိုကြီး အိပ်နေတာ မနှိုးရဲ ဘူး” တဲ့ .. လား
နှဈခါ ပွနျကွညျခငျြလောကျအောငျ အမိုကျစားပုံစံလေး ဖွဈနတေဲ့ သငျးရတီခငျ ရဲ့ ပုံရိပျမြား
တဈပတျ အတှငျးမှာ သူမဝတျဆငျခဲ့ တဲ့ အမိုကျစားဖကျရှငျတှကေို ခပြွရငျး ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့အလှတရားတှေ ပျေါလှငျနတေဲ့ နခွေညျဦး